Ahoana ny fomba hanampiana fampiharana amin'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Amin'ity lahatsoratra ity dia hodinihintsika tsirairay avy ny fomba samy hafa mety hametrahana programa amin'ny Linux. Raha heverina fa ny Ubuntu no fizarana Linux malaza indrindra, indrindra amin'ireo vao manomboka "misitrika" amin'ny "tontolon'ny Linux", ity mini-tutorial ity, izay mikendry an'ireo "vao manomboka", dia hifantoka amin'ny Ubuntu irery ihany. Na izany na tsy izany, ity fampianarana ity dia mety ihany koa ho an'ny distros rehetra miorina amin'ny Debian sy Ubuntu (satria izy rehetra dia mampiasa fonosana .DEB), ary ny programa sy ny hevitra ankapobeny dia mety ho an'ny disto hafa koa.
Ao amin'ny Ubuntu dia misy fomba maro hanampiana, hanalana na hanavao ny rafi-pandaminana.
Aza adino fa tsy ny rindranasa rehetra misy ho an'ny Ubuntu dia misy amin'ny alàlan'ny default mba hapetraka. Ilaina ny mamela ny fahafaha-mametraka fampiharana sasany amin'ny tanana.
Ny fomba lehibe fametrahana ny rindranasa dia:
Ny Ivontoerana Software Ubuntu. Fampiharana tsotra ahafahanao manampy na manala fonosana amin'ny rafitrao amin'ny fomba tena tsotra.
Ny fandaharana Synaptic. Amin'ny Synaptic dia hanananao fifehezana bebe kokoa amin'ireo programa apetrakao ao amin'ilay rafitra. Ary koa maro an'isa amin'izy ireo. NAOTY: Synaptic izao dia mampiasa apt-get.
Ny fandaharana zatra. Adept dia ny kinova Synaptic ho an'ny KDE, tafiditra ao amin'ny Kubuntu.
Ireo fandaharana apt-get na fahaizana. Ireo dia programa mandroso kokoa izay mandeha amin'ny maody terminal. Mahery vaika izy ireo ary mamela anao hanisy sy hanala ireo rindranasa ao amin'ilay rafitra ankoatry ny zavatra hafa. (Ny aptitude dia feno kokoa noho ny apt-get, mahatadidy ireo tranomboky voasintona izy ireo ary manala azy ireo raha toa ka lany andro izy ireo). Hijery fanampiana ho an'ny programa mandeha amin'ny maody terminal: (man nombre_del_programa). Ohatra: man aptitude
Fonosana Deb. Ny fisie miaraka amin'ny extension .deb dia fonosana fampiharana efa nomanina hapetraka mora ao amin'ny rafitra Ubuntu.
Fisie binary. Ny rakitra misy extension .bin dia programa azo tanterahina ao amin'ny Linux.
Mihazakazaha rakitra. Ny fisie miaraka amin'ny extension .run dia mazàna no mpamosavy hametrahana amin'ny Linux.
Ho hitantsika tsirairay amin'izy ireo ny mampiavaka azy.
1 Amin'ny alàlan'ny programa
1.1 Ny Ivontoerana Software Ubuntu
1.2 Mpitantana fonosana Synaptic
1.3 Administratera manam-pahaizana mahay
1.4 fahaiza-manao sy haingo azo
2 Mampiasa rakitra
2.1 Fonosana Deb
2.2 Fonosana autopackage (extension .package)
2.3 Fisie binary
2.4 Mihazakazaha rakitra
2.5 Manamboara fampiharana avy amin'ny kaody loharano
Amin'ny alàlan'ny programa
Ny Ivontoerana Software Ubuntu
Ny fandaharana Ubuntu Software Center io no fomba mora indrindra amin'ny Ubuntu amin'ny fametrahana na fanesorana programa. Izy io ihany koa no voafetra indrindra.
Azonao atao ny mahita ny programa amin'ny Menu ho an'ny fampiharana> Ivon-toerana Software Ubuntu
(1) Raha hametraka fampiharana dia safidio ny iray amin'ireo sokajy aseho eo amin'ny efijery lehibe amin'ilay programa. Ity dia hanavao ny fikandrana mampiseho ireo programa azo alaina ao amin'io sokajy io. Izao dia mila mitady ilay programa tianao hapetraka fotsiny ianao ary tsindrio indroa eo amboniny. Ny varavarankely dia hampiseho famaritana izany ary hanome anao ny safidy hametraka azy amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra Install.
(2) Raha tsy fantatrao ny faritra misy ilay programa tadiavinao. Ampidiro ao amin'ny boaty fikarohana eo ankavanan'ny ambony ny anaran'ny fampiharana tianao. Rehefa manoratra ny anaran'ny programa ianao dia hihena ny lisitry ny mpirotsaka hofidina mandra-pahitanao ilay tadiavinao.
(3) Amin'ny alàlan'ny fanindriana ny "Rindrambaiko napetraka" ankavia, dia hiditra amin'ny lisitry ny programa rehetra napetrakao amin'ny rafitrao ianao. Raha te hamafa ny iray amin'izy ireo ianao. Tsindrio indroa fotsiny eo dia hanavao ny fikandrana mampiseho anao ny famaritana ny programa ary hanome anao ny safidy hamafana azy.
Eto ianao dia afaka mahita azy manazava izany amin'ny endrika video.
Mpitantana fonosana Synaptic
Synaptic Rafitra mandroso ny fametrahana na fanesorana ireo rindranasa ao amin'ny rafitrao. Ny tontolo dia sary, toy ny ao amin'ny Ubuntu Software Center, saingy matanjaka be kokoa. Miaraka amin'ny Synaptic dia voafehinao tanteraka ny fonosana (rindranasa) napetraka ao amin'ny rafitrao.
Mihazakazaka mifidy Synaptic Rafitra -> Fitantanana -> Synaptic Package Manager. Ity manager manager ity dia hamela antsika hametraka, hametraka ary hanaisotra fonosana amin'ny fomba tsotra be.
Ny efijery Synaptic dia mizara fizarana 4.
Ny roa lehibe indrindra dia ny lisitry ny sokajy (1) amin'ny ilany havia sy ny fonosana (3) Amin'ny ilany ankavanana.
Ny fisafidianana fonosana iray amin'ny lisitra dia hampiseho famaritana momba azy (4).
Raha hametraka fonosana dia azonao atao ny misafidy sokajy iray, tsindrio havanana amin'ny fonosana irina ary safidio ny "miantso hametraka"Sa hanao tsindrio indroa amin'ny anarana fonosana.
Mariho amin'ity fomba ity ny fonosana rehetra tianao hapetraka amin'ny rafitra ary tsindrio ny Ampiharo raha hiroso amin'ny fametrahana azy ireo. Synaptic izao dia hisintona ireo fonosana ilaina amin'ny repositories amin'ny Internet na amin'ny CD fametrahana.
Azonao atao koa ny mampiasa ny bokotra Search raha te hahita ireo fonosana tianao hapetraka.
Amin'ny fipihana ny bokotra fikarohana dia afaka mitady programa amin'ny anarana na famaritana isika. Raha vantany vao hita ny programa izay tiantsika hapetraka, dia tsindrio indroa eo izy hametrahana azy. Raha te hamafa programa isika, ny sisa ataontsika dia tsindrio havanana eo amboniny ary safidio ny hamafana na hamafa tanteraka.
Mba hampiharana ireo fanovana dia ilaina ny manindry ny bokotra Ampiharo.
Ny rafi-pametrahana rindrambaiko ao Ubuntu dia mahery sy be mpampiasa. Ao anatin'ny trano fitahirizana dia voalamina anaty "fonosana" ny rindranasa. Ny fonosana tsirairay dia misy hafa izay miankina amin'ny asany marina. Synaptic dia mikarakara ny famahana ireo fiankinan-doha ireo sy fametrahana ireo fonosana ilaina ho anao. Fa tsy izany ihany. Ao amin'ireo fonosana fangatahana, misy fonosana hafa koa voalaza fa na dia tsy ilaina amin'ny fampiharana izay tiana hapetraka aza izy ireo dia ilaina. Ireo no "fonosana naroso".
Azontsika atao ny manamboatra Synaptic handinika ireo fonosana ireo «soso-kevitra»Toy ny hoe fiankinan-doha izy ireo ary hametraka azy ho azy ihany koa.
Mandrosoa Synaptic ary mandehana mankany Fikirana> Préférences, ao amin'ny Tab General Zahao ilay boaty "Raiso ireo fonosana aroso ho fiankinan-doha".
Administratera manam-pahaizana mahay
Ireo mpampiasa Kubuntu dia manana ny mitovy amin'ny Synaptic, antsoina Administratera manam-pahaizana mahay. Hita ao amin'ny menio izany KDE> Rafitra> Administrator manam-pahaizana. Ny fandidiana dia mitovy amin'ny Synaptic.
Amin'ny fampiasana ny boaty fikarohana dia azonao atao ny mitady fonosana amin'ny anarany sy amin'ny famaritany. Amin'ny alàlan'ny fanindriana indroa amin'ny singa iray amin'ny valin'ny lisitra, dia voamarika ny hametraka.
Azonao atao ny mahita ny fiankinan-doha amin'ny fonosana iray amin'ny fijerena ny fananany ("pitsopitsony").
Azontsika atao ny mitantana ireo trano fitahirizana amin'ny adept amin'ny alàlan'ny fanindriana ny menio adept ary avy eo mitantana fitahirizana
Rindrambaiko Kubuntu : eto izy ireo (main, izao rehetra izao, voafetra, multiverse) ary iray hafa izay misy ny kaody loharano, miampy menio mitete-midina hisafidianana hoe aiza na avy aiza no lozisialy alaina.
Rindrambaiko an'ny antoko fahatelo: Eto izahay dia afaka mampiditra repositories an'ny antoko fahatelo na cdrom.
Updates: Fanavaozana ny Kubuntu, azontsika atao ny misafidy ireo fanavaozana izay hojeren'ny adept, manamboatra ny fanavaozana mandeha ho azy ihany koa isika, afaka misafidy ny hametraka azy ireo nefa tsy mampandre antsika, misintona azy ireo mangina na mampandre fotsiny fa misy fanavaozana.
fanamarinana: Ireto ny lakilen'ny sonia ho an'ireo rakitra ampidininay avy amin'ny trano fitehirizana, koa raha mahita trano fitehirizana antoko fahatelo mahaliana anay izahay ary mitantana sonia dia azonay ampidirina izany amin'ny alàlan'ny fisintomana ilay rakitra sonia avy amin'ny tranokala na ftp mankamin'ny lahatahiry ary manafatra azy na ampidirinay amin'ny fipihana ny bokotra "Import Key File ..."
Aorian'ny fampidirana na fanesorana ireo toerana fitahirizam-bolan'ny rafitra handraisana ireo fanovana dia tsy maintsy tsindrio ny bokotra fanamarinana fanavaozana
fahaiza-manao sy haingo azo
Na dia afaka mametraka programa amin'ny sary aza isika, araka ny hitantsika tamin'ireo teboka teo aloha, dia afaka mampiasa ny terminal foana isika hametrahana programa.
Ho an'ireo mpampiasa vaovao maro, ity safidy ity dia mety ho somary sarotra kokoa ary somary cryptic. Tsy misy zavatra lavitra amin'ny zava-misy; rehefa zatra izany dia mahazo aina kokoa, mora sy haingana kokoa.
Misy fomba roa hametrahana programa amin'ny maody an-tsoratra: miaraka fahaizana and with mahay-mahazo.
Ireo programa roa ireo dia tena mitovy, afa-tsy amin'ny antsipiriany iray: ny fahatsiarovan-tena dia mahatadidy ireo fiankinan-doha nampiharina tamin'ny fametrahana fonosana. Midika izany fa raha mametraka na manavao ny rindranasa misy aptitude ianao ary avy eo te-esorina dia hofongan'ny aptitude ny programa miaraka amin'ireo fiankinana rehetra (afa-tsy raha ampiasain'ny fonosana hafa). Raha apetraka miaraka amin'ny tontolon'ny sary apt-get na Synaptic, ny fanesorana dia hanala ny fonosana voafaritra ihany, fa tsy ny fiankinan-doha.
Manokatra terminal izahay amin'ny alàlan'ny Fampiharana -> Fitaovana -> Terminal.
$ sudo apt-mahazo mametraka
Esory ny fonosana:
$ sudo apt-get esory
Esory ny fonosana (ao anatin'izany ny fisie configur):
Hanavao ny lisitry ny fonosana misy:
Hanavao ny rafitra miaraka amin'ny fanavaozana fonosana azo alaina:
$ sudo apt-mahazo fanavaozana
Makà lisitry ny safidy amin'ny baiko:
$ sudo apt-mahazo fanampiana
Mametraha fonosana tsy misy Internet
Amin'ny solosaina izay manana Internet ary tsy apetraka ny programa / fonosana izay tadiavintsika, dia azontsika atao ny misintona ireo fonosana miaraka amin'ny fiankinan'izy ireo (mbola tsy napetraka) amin'ny fampiasana ireto baiko roa ireto:
sudo aptitude madio sudo aptitude hametraka -d package_name
Rehefa mametraka fonosana amin'ny alàlan'ny aptitude / apt isika dia mijanona ao anaty fampirimana manokana. Amin'ny baiko voalohany izay ataontsika dia mamafa ireo fonosana ireo amin'ny solosaina (tsy misy akony amin'ny fametrahana efa vita).
Ny baiko faharoa dia hampidina ny fonosana tadiavinay sy ny fiankinan-doha ilainy, saingy tsy hametraka azy io. Mandeha any amin'ny "/ var / cache / apt / archives" izahay izao ary mahita ireo fonosana ireo. Maka tahaka azy ireo izahay, mitondra azy ireo any amin'ny solosaina izay tsy misy fifandraisana ary mametraka azy ireo amin'ny alàlan'ny fanindriana indroa amin'ny tsirairay amin'izy ireo na amin'ny console:
Tadidio fa raha misy fiankinan-doha dia tsy maintsy apetrakao ireo aloha. Mety misy koa ny tranga sasany amin'ireo fiankinan-doha ireo efa napetraka ao anaty solosaina amin'ny Internet, mba tsy hisintomana azy ireo.
Raha efa napetraka amin'ny solosaina amin'ny Internet izany dia azo esorina amin'ny alàlan'ny "aptitude Delete" (tsy misy purge) ary esorinay ny "-d" avy amin'ilay "aptitude install" apetraka. Amin'io fomba io no esorintsika voalohany ary avy eo sintomina sy apetraka. Amin'izany fomba izany, ny solosaina miaraka amin'ny Internet dia hanohy hanana ilay programa mitovy amin'ny alohan'ny famafana azy.
Mba hamahana sy hisorohana ny olana mety miankina dia afaka mandeha any amin'ny Synaptic an'ny solosaina amin'ny Internet isika, mitady ny fonosana tadiavintsika, tsindrio tsara ny fonosana resahina, miditra isika Propiedades ary safidio ny kiheba outbuildings. Eo no ahitantsika ireo fonosana ilaintsika mba hametrahana tsara ilay fonosana amin'ny solosaina tsy misy Internet.
Raha azo atao, azontsika atao ihany koa ny misintona ireo kapila debian izay misy programa sy fonosana .deb maro, izay mahatonga azy ireo hifanaraka amin'ny ubuntu, ny loharanon'ilay rindrambaiko ihany no ampidirintsika ary tsindrio ny add cd-rom.
Fomba iray hafa hametrahana fampiharana amin'ny rafitra amin'ny alàlan'ny fonosana efa nomanina hapetraka ary miaraka amin'ny extension .deb.
Mba hametrahana ireo fonosana ireo dia mila ataonao fotsiny tsindry doble amin'ny fisie ao amin'ny navigateur Nautilus ary hanomboka ho azy ny fampiharana gdebi, izay hikarakara ny fametrahana ny fonosana ary hitady ny fiankinan-doha amin'ny fonosana hafa mety ilainy amin'ny fametrahana azy marina.
Raha aleontsika dia azo apetraka ihany koa izy ireo amin'ny alàlan'ny tsipika fandidiana, amin'ny alàlan'ny baiko dpkg:
Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy apetrakao ihany koa ny fiankinan-doha amin'ny fonosana.
Ity baiko ity ihany koa dia azo ampiasaina hanalana ny fonosana:
Hanova ny fonosana RPM ho Deb
Ny fizarana GNU / Linux sasany, toy ny Red Hat, SUSE, ary Mandriva, dia mampiasa fonosana .rpm, voalamina tsy mitovy amin'ny fonosana Debian sy Ubuntu .deb.
Mba hametrahana ireo fonosana ireo dia tsy maintsy ampodinao amin'ny endrika .deb aloha izy ireo. Ho an'ity dia ampiasaina ny fampiharana vahiny, izay azo apetraka amin'ny alàlan'ny iray amin'ireo fomba hazavaina amin'ity lahatsoratra ity. Ny fampiharana vahiny dia ampiasaina toy izao:
Manokatra terminal izahay (Fampiharana> Fitaovana> Terminal) ary manatanteraka ity torolàlana manaraka ity:
Amin'izany fomba izany dia mamorona rakitra misy ny anaran'ilay fonosana ilay programa, fa miaraka amin'ny extension .deb, izay azo apetraka aorian'ny fanazavana ny fonosana Deb.
Fonosana autopackage (extension .package)
Ny tetikasa Autopackage teraka tamin'ny hevitra hanamorana ny fametrahana ny rindranasa ao amin'ny Linux na inona na inona fizarana sy birao ampiasainy. Izany no mahatonga ny tetikasa maro mampiasa azy, toy ny Inkscape.
Ny fametrahana file .package voalohany dia mora be. Araho fotsiny ny torolàlana etsy ambany (ny pejy momba ny tetikasa dia manondro ny fomba).
Raha vantany vao alaina ny rakitra dia tsy maintsy omentsika alalana fampiharana, tsindrio indroa amin'ny rakitra ary amin'ny fampandrenesana angatahiny Te hihazakazaka __ ve ianao sa hijery ny atiny? tsy maintsy tsindrio isika Run. Vantany vao vita izany dia hanomboka ny installer an'ny programa Autopackage sy ny atin'ny fonosana.
Rehefa apetraka ny programa Autopackage, ny rakitra manaraka an'ity karazana tianao apetraka ity, tsindrio indroa fotsiny eo io fa tsy mila manao na inona na inona etsy ambony.
Ny fisie miaraka amin'ny extension .bin dia fisie binary. Tsy misy andiana programa na tranomboky toa ny fonosana izy ireo, fa ilay programa ihany. Raha ny mahazatra, ny programa ara-barotra dia zaraina eo ambanin'ity rafitra ity, izay mety maimaimpoana na tsia, saingy tsy maimaim-poana.
Rehefa misintona rakitra toy izany isika ary hitahiry azy ao amin'ny rafitra dia tsy hanana alalana hihazakazaka izy io.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika, noho izany, dia ny manome alalana an'io fisie io hihazakazaka. Mampiseho ny menio ara-nofo ao amin'ilay rakitra izahay ary misafidy ny safidy Propiedades. Misafidy ny kiheba izahay alalana ary ho hitantsika fa efa namaky sy nanoratra alalana ho an'ny tompony ny fisie fa tsy hamonoana. Mampihetsika ny boaty izahay hanomezana alalana famonoana ary hanidy ny varavarankely.
Ankehitriny satria nanome alalana an'ilay rakitra izahay mba hahafahany manatanteraka azy, dia ataovy tsindrio roa. Rehefa manao an'io ianao dia hiseho ny varavarankely manome safidy maromaro anao. Mifidiana Run.
Mba hanaovana izany avy amin'ny terminal:
Manome alalana amin'ny fanatanterahana ilay rakitra izahay:
Mametraka ny rakitra binary izahay:
rakitra .run mpamosavy izy ireo, mazàna sary, izay manampy amin'ny fametrahana. Mba hamonoana azy ireo dia miditra fotsiny amin'ny terminal:
Raha ny mahazatra, raha toa ka mila alalana superuser ianao (antsoina koa hoe administratera na faka) hangataka ny tenimiafina; raha tsy izany dia ampio fotsiny ny baiko sudo alohan'ny baiko, izay toa izao:
Manamboara fampiharana avy amin'ny kaody loharano
Indraindray ianao dia hahita rindranasa izay tsy manome fonosana fametrahana, ary mila manangona avy amin'ny kaody loharano ianao. Mba hanaovana izany, ny zavatra voalohany tsy maintsy ataontsika ao amin'ny Ubuntu dia ny mametraka fonosana antsoina hoe meta-package ilaina-manorina, mampiasa ny iray amin'ireo fomba hazavaina ato amin'ity lahatsoratra ity.
Amin'ny ankapobeny, ny dingana manaraka hanangonana rakitra dia ireto manaraka ireto:
Sintomy ny kaody loharano.
Unzip ny kaody, mazàna fonosina amin'ny tara voafety ao ambanin'ny gzip (* .tar.gz) na bzip2 (* .tar.bz2).
Ampidiro ny lahatahiry noforonina tamin'ny famonoana ny kaody.
Alefaso ilay script configures (Izy io dia ampiasaina hanamarinana ireo toetoetran'ny rafitra misy fiatraikany amin'ny fanangonana, fametrahana ny fanangonana arak'ireo soatoavina ireo, ary hamorona ilay rakitra manamboatra).
Mandehana baiko manao, miandraikitra ny fanangonana.
Mandehana baiko sudo hanao fametrahana, izay mametraka ny rindranasa amin'ny rafitra, na mbola tsara kokoa, apetraho ilay fonosana tsindrio, ary mihazakazaka sudo checkinstall. Ity fampiharana ity dia mamorona fonosana .deb ka tsy mila atambatra amin'ny manaraka, na dia tsy misy ny lisitry ny fiankinan-doha aza.
Ny fampiasana tsindrio Manana tombony ihany koa izy io satria hanara-maso ireo programa napetraka tahaka izao ny rafitra, ary hanamorana ny famafana azy ireo ihany koa.
Ity misy ohatra iray feno amin'ny fihazakazahana ity fomba ity:
tar xvzf sensors-applet-0.5.1.tar.gz cd sensors-applet-0.5.1 ./configure --prefix = / usr ataovy izay hanasongadinana sudo
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Ahoana ny fomba hanampiana fampiharana amin'ny Linux
Maka35 dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao fotsiny fa nanampy an'ity pininiko voalohany tany ubuntus ity aho
Valiny tamin'i Tomas35
Tongasoa ianao, Thomas!
Mijanona eo am-pelatananao izahay raha te hanolotra lohahevitra vaovao amin'ny bilaogy ianao.
Mauro dia hoy izy:
Super feno, fohy ary esory ireo fampianarana ireo! Misaotra che!
Mamaly an'i Mauro
Manuel. dia hoy izy:
Misaotra betsaka, lahatsoratra mahaliana.
Mandehana hatrany ho tombontsoan'ny zaza vao teraka toa ahy.
Mamaly an'i manuel.
Mindundi dia hoy izy:
Misaotra betsaka tamin'ny fampianarana.
Mamaly an'i MinDundi
Fitaovana hanoratana ny biraonao